ဆီးရီးယား တိမ်းရှောင်သူတွေ အကြောင်းလား။ သူတို့၏ ဖြစ်ရပ်တွေကို မဝေမျှခင် သင့်ရတဲ့ အချက်အလက်တွေကို မှန်ကန်တိကျအောင် အရင်လုပ်ပါ။ · Global Voices မြန်မာ
ဘာသာ​ပြန်​တင်​ခဲ့​သည့် နေ့စွဲ2နိုဝင်ဘာ 2015 1:13 GMT
ဤစာပုဒ်​ကို အောက်​ပါ​ ဘာသာ​စကား​များ​တွင်​လည်း ဖတ်​ရှု​နိုင်​ပါ​သည် Español, Català, polski, srpski, English
ဒုက္ခသည်တွေဟာလည်း လူသားတွေပါပဲ။ Photograph from Commons Wikimedia CC-BY-SA-3.0
ဤနှစ်မှာ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းသည်တစ်ခုက ဆီးရီးယားဒုက္ခသည်များ၏ နှစ်တစ်နှစ်လို ဖြစ်နေတော့သည်။ သူတို့၏ စစ်ကပ်ဘေးဆိုက်နေသော တိုင်းပြည်မှ ထွက်ပြေးလာသော လူများ၏ မရေမတွက်နိုင်သော ဖြစ်ရပ်ဇာတ်လမ်းများဟာ အသဲကွဲစရာပင် ဖြစ်သော်လည်း ကျွန်တော်တို့သည် သူတို့၏ ပုံပြင်အချို့ကိုတော့ ကြည့်ရာမှာ ပြောသမျှ အကုန်မယုံဖို့တော့ လိုအပ်ပေသည်။ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင် လူတွေ၏ အဖြစ်ဆိုးကို ဖော်ပြတာတော့ ဟုတ်ပေမဲ့ အမှန်တကယ်မှာတော့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲထားသည့် သို့မဟုတ် မှားယွင်းစွာ ဖော်ပြထားသည့် အင်တာနက်ပေါ်၌ ပြန့်နေသော ဓါတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်က လူတွေဟာ ကံမကောင်းစွာပင် အချက်အလက်အမှားများကို ရရှိနေကြရသည်။
ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များကတော့ လူတွေပိုများများကြည့်အောင် ပြုလုပ်လိုခြင်းမှ အစ နိုင်ငံရေး ကြိုးကိုင်လိုခြင်း အဆုံး အမျိုးမျိုးရှိကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဥရောပရှိ အချို့ လက်ယာဘက် နိုင်ငံရေးပါတီများဟာ လတ်တလော ဒုက္ခသည် အရေးအခင်းများကို အသုံးချကာ ဆီးရီးယား ဒုက္ခသည်များ ဥရောပတွင် ခိုလှုံမှုကို တံခါးပိတ်ဖို့ ၄င်းတို့၏ အစီအစဉ်များကို တွန်းပို့ရန် ကျိုးစားနေကြသည်။ အမှန်ပင် ယခု လက်ရှိ Facebook ပေါ်မှာ အလွန် ပြန့်နှံ့နေသော ဓာတ်ပုံဖြစ်သည့် ဂျာမနီရှိ ဆီးရီးယား ဒုက္ခသည်များ ISIS အိုင်စစ် အလံကို ဝှေ့ယမ်းနေသည် ဟုဆိုနေသော ဓာတ်ပုံသည် လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်က ဓာတ်ပုံသာဖြစ်သည်၊ လက်ရှိ အရေးအခင်းနှင့် ဆက်စပ်သည်မဟုတ်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ဆီးရီးယားဒုက္ခသည်များနှင့် ပက်သက်သည့် ဖြစ်ရပ် ၄ခုသည် သင်၏ လူမှုကွန်ယက် အကောင့်အပေါ်တွင် ကြုံဖူး မြင်ဖူးကြမည့် အဖြစ်များ ဖြစ်သော်လည်း တကယ့် ဖြစ်ရပ်မှန်နှင့်တော့ တလွှဲသာဖြစ်သည်။
ဖြစ်ရပ် ၁။ ။အီတလီ ဖက်ရှင်မော်ဒယ်နှင့် ဆီးရီးယားနိုင်ငံမှ ရွှေ့ပြောင်းလာသူ လှေတစ်စင်း
ဘယ်လ်ဂျီယံရောက် ဆီးရီးများ Facebook အုပ်စု၏ ဝေမျှထားသော အထက်ဒီဗီဒီယိုကို အောက်ပါစာတန်းနှင့် တွေ့နိုင်သည်။ ။
ကမ်းခြေတစ်ခုမှာ အီတလီမော်ဒယ် တစ်ဦးက ဗီဒီယိုရိုက်ကူးနေစဉ် ရုတ်တရက် မထင်မှတ်တဲ့ အဖြစ်တစ်ခုဖြစ်သွားပါတယ်၊ မျှော်လင့်မထားတဲ့ ဒုက္ခသည် ရွှေ့ပြောင်းသူတစု အီတလီမှာ လုံခြုံစိတ်ချစွာ ကမ်းခြေသို့ ရောက်ရှိလာပါတယ်။ ဒီ မော်ဒယ်ဟာတော့ ဒီလို နှစ်ခါပြန်မဖြစ်မယ့် ကောက်ကာငင်ကာ နှင့် ရယ်စရာ ဖြစ်သွားတဲ့ အဖြစ်နဲ့တော့ ကျော်ကြား လိမ့်ဦးမယ်။ သူတို့ထဲက အများစုဟာ ဆီးရီးယား နှင့် ပါလက်စတိုင်းတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့၏ အဘေးကင်းလုံခြုံမှု အတွင် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သို့သော် ယခုလက်ရှိ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဝေမျှနေသည့် ဗီဒီယိုသည် အီတလီမှ မဟုတ်သလို ရိုက်ကူးထားသည့် နေရာမှာလည်း အီတလီတွင် မဟုတ်ပါ။ ဒုက္ခသည်တွေဟာလည်း ဆီးရီးယား မဟုတ်သလို ပါလက်စတိုင်းတွေလည်း မဟုတ်ကြပါ။ မူရင်း ဗီဒီယိုသည် အမေရိကန်အခြေစိုက်ရုရှားမော်ဒယ် (Ekaterina Juskowski) အေကတရီနာ ဂျူစကော်စကီမှ YouTube ပေါ်မှာ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက် ၂၀၁၅ တုန်းက ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး အောက်ပါ ဖော်ပြချက်ကို ရေးထားပါသည်။ ။
အသက် ၁၈ နှစ်တုန်းက တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူတစ်ဦးအဖြစ် ရုရှားမှနေ ရွှေ့ပြောင်းလာခဲ့သော မိုင်ယာမီ အခြေစိုက် အနုပညာရှင်နှင့် မိုင်ယာမီ မိန်းကလေးများ ဖောင်ဒေးရှင်း (www.miamigirls.org)ကို တည်ထောင်သူ မစ္စ ဂျူစကော်စကီ မှ သနားကြင်နာတတ်သူ အမြင်အနေနှင့် ပြောလိုပါသည်။ လှေပေါ်မှ ခုန်ဆင်းပြီး မြို့သို့ အပြေးအလွှား ဘဝသစ်ကို စတင်ရန် သွားနေသူတို့ကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ရတာ ကျွန်မကိုယ်တိုင် တစ်ကိုယ်ရည် ရုန်းကန် ခဲ့ရတာနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် သေးငယ်တဲ့ အရာတစ်ခုပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။ တရားမဝင် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်းဟာ ပြဿနာအဖြစ် ကျွန်မတို့တွေ အတွက် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ အရာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ဒီလူတွေဟာ ပိုမို ကောင်းမွန်သော ဘဝကို ရှာဖွေဖို့ အတွက်က အရဲစွမ်းသတ္တိဖြင့် ကြီးမားသော စွန့်စားမှု၊ ပင်ပန်းကြိုးစားမှု နှင့် အထီးကျန်မှုတို့ကို အလွန်မြင့်မားစွာ ပေးဆပ်လာရတယ်ဆိုတာကို အောက်မေ့ဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ စိတ်နှလုံးထား သဘောထားကြီးမားတဲ့ နိုင်ငံဆိုတာ ကျွန်မ သိပါသည်။ အမေရိကန်အစိုးရအနေနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် ပက်သက်သော ဥပဒေများကို တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးအပေါ် မူဝါဒများထုတ်ရန် လုပ်ဆောင်ဖို့ကို ကျွန်မ ယုံကြည်သလို၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဆင့်မှာလည်း ထောက်ထားစာနာမှုနှင့် နားလည်ပေးနေနိုင်ဖို့အတွက် ခံစားရတာဟာ သဘာဝကျပါသည်။
ဖြစ်ရပ် ၂ ။ ။ မိဘနှစ်ပါး၏ အုတ်ဂူနှစ်ခုအကြားမှာ အိပ်နေသော ဆီးရီးယား ကလေးငယ်
“သေဆုံးသွားသော မိဘနှစ်ပါး၏ မြေပုံအကြားမှာ စောင်တစ်ထည်ခြုံကာ အိပ်နေသော ဆီးရီးယား ကလေးတစ်ဦး၏ ဓာတ်ပုံကို သင် မြင်ပြီးကောင်း မြင်ပြီးလိမ့်မယ်။ ယင်း ဓာတ်ပုံကို (၂၀၁၄ ဇန်နဝါရီလ တုန်းက) နာမည်ကြီးကြီး အကောင့်တစ်ခုက Twitterပေါ်တင်ပြီး နောက် ပြန့်နှံ့သွားတာပါ” ဟု Harld Doornbos ဘလော့မှာ ရေးထားပါသည်။
ပြဿနာ တစ်ခုသာရှိသည်။ အဆိုပါ ဓာတ်ပုံမှာ ဆီးရီးယားမှမဟုတ်၊ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံကနေ ဖြစ်သည်။ Photo credit haralddoornbos blog
ဤဘလော့ဂ်သည် ယင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဤပုံပြင်၏ နောက်ကွယ်မှ ယန်နု အယ်လ် ဘာရ် မြို့နေ ဆော်ဒီနိုင်ငံသား ဓာတ်ပုံဆရာ (Abdul Aziz al Otaibi) အဘ်ဒူ အာဇိ အယ်လ် အိုတိုင်ဘီကို ဆက်သွယ်ကာ ဤကိစ္စကို ပထမဦးဆုံး စုံစမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံထဲမှ ကလေးငယ်ဟာ ၄င်း၏ တူအရင်း အဖြစ်သည်။
“ကျွန်တော့်ရဲ့ ဓာတ်ပုံက ဆီးရီးယားနှင့် ဆိုင်တယ်ဆိုတာ လုံးဝ မမှန်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကို လူတွေက ဒီလို မလိမ့်တစ်ပတ်လုပ်ကြပုံကို အံ့အားသင့်မိပါတယ်။ ” ဟု အယ်လ်-အိုတိုင်ဘီက ဆိုပါသည်။
“ကျွန်တော် ဓာတ်ပုံပညာကို မြတ်နှိုးပါတယ်။ အနုပညာရှင်တိုင်းက သူတို့ခေါင်းထဲမှာ စိတ်ကူးတွေရှိကြတယ်လေ။ ကျွန်တော်လည်း ကလေးငယ်တစ်ယောက်က သူ့မိဘတွေအပေါ်မှာ ထားတဲ့ အမေတ္တာက ဘယ်သူနဲ့မှ အစားထိုးလို့မရဘူးဆိုကို ဓာတ်ပုံထဲမှာ ပြဖို့ အတွေးတစ်ခုအတွက် အစီအစဉ်လေးလုပ်ခဲ့တာပါ။ ဒီလို မေတ္တာမျိုးကို သူ့ရဲ့ မိဘတွေ ဆုံးသွားတာတောင် ဘယ်သူမှ၊ ဘယ်အရာမှ အစားမထိုးနိုင်ပါဘူး။” ဟု ၄င်းက ဖုန်းမှ တဆင့် ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
Twitter တွင် အဘ်ဒူ အာဇိ အယ်လ် အိုတိုင်ဘီသည် ဇာတ်လမ်းကို ပြန်ရှင်းအောင်ပြုလုပ်ရန် မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် ဇန်နဝါရီလ ၂၀၁၄ မှ သူ၏ တူဖြစ်သူ၏ နောက်ထပ်ဓာတ်ပုံ တစ်ပုံ ဝေမျှခဲ့သည်။
ဒီပုံက ကျွန်တော့် တူ အီဘရာဟင်နှင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ကွင်း နောက်ကွယ်ကပုံ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်ရပ် ၃။ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူများက ဟလာလ်အစားအသောက် မဟုတ်လို့ လက်မခံပါဟု ငြင်းဆို
YouTube အသုံးပြုသူ komehtap K သည် မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်များသည် မက်ဆီဒိုးနီးယားနှင့် ဂရိနိုင်ငံအကြား နယ်စပ်တွင် သူတို့ကို ပေးဝေထားသော အစားအစာထုတ်များ၌ ကြက်ခြေနီသင်္ကေတ ပါနေခြင်းဟာ ဟလာလ် မဟုတ်သောကြောင့် အစားအစာအထုပ်များကို ငြင်းဆန်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုဗီဒီယိုသည် အစစ်အမှန်ဖြစ်သော်လည်း ၄င်းပြောသော အချက်အလက်များကတော့ လုံးဝ လွဲနေပါသည်။
ကြက်ခြေနီပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် John Aangendal Nielsen ပြင်သစ် သတင်းစာ Liberation သို့ ပြောကြားမှုအရ ဒုက္ခသည်များဟာ အစာထုတ်မျာကို ငြင်းပယ်ခဲ့တာဟာ အထဲတွင်ပါသည့် အစားအစာတွေနှင့် ပက်သက်၍ မဟုတ်ပဲ သူတို့လမ်းကို ပိတ်ဆို့ထားထားပြီး တညလုံးမိုးရွာထဲတွင် ပိတ်မိနေအောင်ပြလုပ်ထားသော အစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသည့် သဘောမျိုးဖြင့် ပြုလုပ်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
YouTube ပေါ်တွင် komehtap K သည် ဤသို့ ရှင်းပြထားသည်။
မက်ဆီဒိုနီးယားက မွတ်စလင် တိမ်းရှောင်သူတွေ ကြက်ခြေနီက ပေးတဲ့ အစာထုတ်ကို ငြင်းပယ်နေကြတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့…ကြက်ခြေနီတံဆိပ်ပါလို့။
လူထောင်ပေါင်းများစွာ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ခေါင်းဆောင်များမှ ကမူးရှူးထိုး တုန့်ပြန့်မှုကြောင့် ဒီ ဒုက္ခသည်လို့ ခေါ်နေကြတဲ့ လူတွေက သူတို့သွားချင်သည့် နေရာကို သွားခွင့်ပြုဖို့ တောင်းဆို နေရုံသာမက သူတို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသော ဘာသာရေး တယူသန်မှုကို သူတို့နှင့် တပါးတည်း ယူဆောင်လာရန် မလျှော့တန်း တောင်းဆိုနေတဲ့ အခြေအနေမျိုးကို ရောက်စေတယ်။
ကြက်ခြေနီက အကူအညီပေးတဲ့ အစာထုတ်တွေရဲ့ ပုံးမှာ ကြက်ခြေနီ သင်္ကေတပါလို့ ငြင်းဆန်နေကြတာ ဒီ ဂရိ /မက်ဆီဒိုနီးယား နယ်စပ်မှာပါ။ ကျုပ်က ဒီဒုက္ခသည်လို့ ခေါ်တဲ့သူတွေကို ဘယ်လောက် စစ်မှန်သလဲလို့ မေးလို့ လက်ဝဲဘက် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေက ကျုပ်ကို တယူသန်လို့ ခေါ်ကြတယ်။
ဤကိစ္စနှင့် ပက်သက်ကာ Twitter ပေါ်တွင် လူအများအပြားက ဒုက္ခသည်များဟာ “ကျေးဇူးမသိ” ဟု အမျက်ဒေါသနှင့် တုံ့ပြန်ခဲ့ ကြသည်။
သူတို့ကို ပေးဝေထားတဲ့ ရိက္ခာတွေကို လာလ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီး ဆီးရီးယား ယောက်ျားတစ်အုပ် လွှင့်ပစ်နေတဲ့ ဗီဒီယိုကို မြင်လိုက်ရတယ်။သူတို့ကို ပြန်ပို့သင့်တယ်။
- Niall (@SpiritBlade_) စက်တင်ဘာ ၁၀, ၂၀၁၅
Unbelievable and ungrateful! #Syrian#refugees in #Hungary are complaining because the food they are being given is not guaranteed as Halal.
မယုံနိုင်စရာပဲ ကျေးဇူးကန်းချက်ကတော့ #ဟန်ဂေရီ မှ #Syrian #refugees တွေ သူတို့ကို ပေးထားတဲ့ စားနပ်ရိက္ခာတွေဟာ ဟလာလ်အဖြစ် အာမခံချက် မပေးနိုင်လို့ဆိုပြီး စောဒကတက်နေကြတယ်။
- Mike (1961mike @) စက်တင်ဘာ ၁၁, ၂၀၁၅
ဖြစ်ရပ် ၄။ ။ပင်လယ်ထဲမှ ဆီးရီးယား မိခင်တစ်ဦး၏ Photoshopထားသော ဓာတ်ပုံ
ဆီးရီးယားမိခင်တစ်ဦးဟာ ၄င်း၏ ကလေးငယ်ကို ချီလျက် လုံခြုံဘေးကင်းရာသို့ ရေကူးဖို့ကြိုးစားနေသည် ဟုထင်ရသော ဓာတ်ပုံ။ ယင်းဓာတ်ပုံသည် အင်တာနက် ပေါ်တွင် ပြန့်နှုံသွားသည်။ (မူရင်း တင်သူကို မသိရ) သို့သော် အမှန်တကယ်ကတော့ ယင်း ဓာတ်ပုံထဲမှာ မြင်ရသလို မဟုတ်။
ပင်လယ်ထဲမှာ ရုန်းကန်နေသည့် ဆီးရီးယားမိခင်၏ ဓာတ်ပုံသည် အွန်လိုင်း ပေါ်တွင် ပြန့်နှုံနေသည်။ သို့ပေမဲ့ တခုခုကတော့ လွဲနေသည်။ အင်တာနက်သုံးသူတွေဟာ ဓာတ်ပုံဟာ photoshopped လုပ်ခံထားရပြီး အမျိုးသမီး၏ ဆံပင်ကို ဖုံးအုပ်ထားသည်ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် သတိပြုမိခဲ့ကြသည်။ Omneya Talaat က tweet တွင် ဤသို့ပြောသည်။ ။
လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ ဆံပင်ကိုဖုံးအုပ်မှုကိုပဲ စိတ်ပူပြီး သူမကို ဂုဏ်သိက္ခာရှိပြည့်ဝသော ဘဝကို ပံ့ပိုးဖို့ စိတ်ဝင်စားမှု မရှိတဲ့အခါ ဒီလို လူ့အဖွဲ့အစည်းမျိုးဟာ သတိတရားမရှိတဲ့ လမ်းဖက်ကို လျှောက်လှမ်း နေပါပြီ။ ဒီနေရာမှာ ဘာမှ ငြင်းခုန် နေစရာ မရှိတော့ပါဘူး။
Phogotraphy ဘလော့ဂ်က ဆီးရီးယား ဒုက္ခသည်များ၏ အခက်အခဲကို မီးမောင်းထိုးပြဖို့ ဘာ့ကြောင့် ပြုပြင် ပြောင်းလဲထားတဲ့ ဓာတ်ပုံကို သုံးနေသလဲကို မေးခွန်းထုတ်ထားသည်။:
ဤ ကြောက်စရာ ဓာတ်ပုံဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ သူမ၏ သားနှင့်အတူ လှေ နစ်မြုပ် ပြီးနောက် တူရကီ ကမ်းလွန်မှာ ကယ်တင်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆီးရီးယားဒုက္ခသည် (Rukhsan Muhammed) ရုခ်ရှန် မူဟာမက် ကို ပြထားတဲ့ ဓာတ်ပုံပါ။ ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး စစ်ဆေးစရာ မလိုအပ်ပဲနဲ့ ဓာတ်ပုံမှာ ဒစ်ဂျစ်တယ် ကိရိယာတွေကို သုံးပြီး အဖြူ ပုဝါကို မသပ်မရပ် ဆေးချယ်ထားတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်နိုင်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံထဲမှ ဖမ်းယူထားတဲ့ အခိုက်ဟာ အလုံးဆုံ မျှော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့နေေသာ အခိုက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ရုခ်ရှန် ဟာ ပြင်းထန်တဲ့ ရေလှိုင်းတွေကြောင့် သူမ၏ ၁နှစ်အရွယ်သားနှင့်အတူ ရေထဲတွင် မျောနေသည်ကို ဓာတ်ပုံမှ သိရသည်။ ဆိုတော့ ဒီလို ဆိုးရွားတဲ့ အခြအေနတစ်ခုကို သေးနုပ်သယောင်ဖြစ်အောင် ဒီသနားစရာကောင်းတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ ဣန္ဒြေကို ကာဖို့ဆိုပြီး ပုဝါကို ဘာလို့ ဆွဲနေသေးတာလဲ။
သူမ၏ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုက အရေးကြီးသလား။ Phogotraphy ကရှင်းပြသည်။ ။
အဟုတ်ပါပဲ ထိုအဝတ်အစားများအောက်တွင် လူသားတစ်ဦးသာ ဖြစ်သည်။ သူမ ကလေး၏ ဘဝ ဆုံရှုံးပြီး သူမ ကိုယ်ပိုင်အသက်ကိုလဲ ဆုံးရှုံးလုနီးပါး ဖြစ်နေသော မိခင်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပူပန်ပြီး သူမဟာ ကိုယ်တိုင် ဒုက္ခကို ပြန်ပြောပြဖို့ အသက်ရှင်မလားကို ဂရုစိုက်သည်။ Anadolu Agency မှ ဓာတ်ပုံများ အတွဲလိုက်မှ ရုခ်ရှန် ဟာ ကံကောင်းထောက်မစွာ ကယ်တင်ခံခဲ့ရသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သိရပြီး အံ့သြစရာကောင်းတာ တစ်ခုမှာတော့ သူမ၏ ရှင်သန်မှု ပုံပြင် မဟုတ်ပဲ သူမ၏ အဝတ်စားဆင်ယင်မှုနှင့် ပက်သက်သော အကြောင်းဖြစ်နေသည်။ သူမဟာ ကျွန်တော်ကဲ့သို့ပင် ဝတ်ဆင်ထားတာကို တွေမြင်နိုင်သည်။ ဥရောပတွင် တိုင်းတပါးသားများကို မုန်းတီးမှုများ မြင့်တက်လာသည့် အကြားမှာ အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ သူတို့ဟာလည်း ကျွန်တော်တို့နှင့် အတူတူပါပဲ ဆိုတာကို ကမ္ဘာကို ပြသဖို့ ပင်ဖြစ်သည်။
ဥရောပတိုက်သို့ ရောက်ရှိလာသည့် ဒုက္ခသည်များသည် လွန်ခဲ့သော လေးနှစ်က သူတို့ မိခင်တိုင်းပြည်တွင် စတင်ခဲ့သည့် ပြည်အတွင်းစစ်ပွဲကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရသော ဆီးရီးယား ၃သိန်း၂သောင်းအထဲမှ ကံကြမ္မာကို လွတ်မြောက်လာသူများဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာ သူတို့၏ အနာဂတ်နှင့် သူတို့ရဲ့ သားသမီးများ၏ အနာဂတ်ကို သေချာစေရန် အားလုံးကို စွန့်စားခဲ့ရသူတွေဖြစ်သည်။ လူတို့သည် ဆက်လက်ရှင်သန်လိုခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ အကဲဖြတ် ထင်ကြေးပေးသင့် ပါသလား။